Aagagga Ganacsiga ayaa Ka Dhigaaya Ganacsiyo E-commerce Khadka Tooska ah Ammaan | Martech Zone
Aagagga Ganacsi ayaa Ka Dhigaysa Ganacsiyo Ka Baxsan Ecommerce Ganacsi Amni
Talaado, Maarso 5, 2019 Khamiis, May 7, 2020 Douglas Karr
Markii aan fiirinayay Facebook-ga subaxnimadii maanta, sheeko aad u qabow ayaa ka soo baxday waaxdayda booliska ee maxalliga ah. Waxay u qoondeeyeen meel ku taal bartamaha magaalada una dhow dhismayaasha dowladda hoose aagga ganacsiga e-commerce. Waxaa jira barxado gawaarida la dhigto iyo badhanka taleefanka otomaatiga ah haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah.
Ma u baahan tahay meel aad wax ka bedesho?
Magaalada Greenwood waxay u qoondeysay laba goobood oo gawaarida la dhigto oo ku taal dhinaca bari ee GFD Station 91 oo ku taal 155 E Main St. Meelaha waxaa lagula socdaa nabadgelyadaada. Sanduuqa wicitaanku wuxuu ku yaalaa gudaha daarta dabka si loo waco 911 haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah. pic.twitter.com/KNRig5aru1
- Booliska Greenwood (@gpd_police) March 4, 2019
Inta badan maahan inaan wax ka qoro wararka sidan oo kale ah, laakiin dhab ahaantii waa kii ugu horreeyay ee aan ka maqlo. Saaxiib maanka ku leh barta Twitter-ka ayaa ii sheegay inay dhab ahaan dalka oo dhan joogaan. In yar oo cilmi baaris ah, waxaan ku ogaaday inay joogaan Atlanta, Chicago, iyo tan kale oo magaalooyin kale ah.
Evan xitaa wuxuu la wadaagay xiriiriye galka tooska ah:
Xarumo Ganacsi oo Ammaan ah
Marka la helo aagagga ku dhow booliska, dadka ku iibinaya alaabada sharci darrada ah ama la soo xaday internetka uma badna inay oggolaadaan inay halkaas ku kulmaan. Iyo dambiilayaasha rajada ka leh inay wax dhacaan ama ku weeraraan ma soo muuqan doonaan, sidoo kale!
Sii Soo-qaadis Ammaan ah
Iyada oo ay sii kordhayaan shirkadaha e-commerce ee ka shaqeeya guriga, tani waxay u muuqataa inay fursad weyn u tahay shirkadaha gobolka. Haddii aad iibineyso maxalli, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku qorto aag ammaan ah ama aagagga ganacsiga e-ganacsiga websaydhkaaga oo aad ku soo qaadatid meelahaas halkii aad ka heli lahayd gurigaaga.
Runtii aad baan ugu farxay markaan arkay tan oo laygu siinayo magaaladeyda yar. Hambalyo Greenwood! Waad ku mahadsantahay ogolaanshaha inaad isticmaasho sawirada.
Tags: dilalka dilalkaaagga ganacsiga isweydaarsiga e-commerceecommercecagaarbooliska GreenwoodGanacsiga onlineaagagga ganacsiga ee nabdoon
IJAAR: Yaa Leh Domain-kaaga?
Qiyaasaha Dhacdooyinka Muhiimka ah ee Masuul Kasta Waa Inuu La Soco